FBSစတား ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့သူတွေကို ကြေငြာပေးနေပါတယ်!
FBSစတားပြိုင်ပွဲကြီး ပြီးဆုံးသွားပါပြီ! မြောက်များစွာသော ဓာတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာအနှံမှ ပေးပို့လာတာကို လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ် - အခုတော့ ဆုရှင်တွေကို ကြေငြာပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။.
ပြီုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန်အတွက် ၀က်ဆိုဒ်မှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး သင့်ရဲ့Personal areaရှိပရိုမိုးရှင်းစာမျက်နှာတွင် FBSတီရှပ်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံး အလှဆုံးဓာတ်ပုံကို အပ်လုပ်ဒ်တင်လိုက်ကာ ငွေသားဆုလက်ဆောင်များရယူလိုက်ပါ! ၀က်ဆိုဒ်တွင် အခြားသူများမှဝင်ရောက်မဲပေးရန် ဖေ့ဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပေးထားသည့်အပြင် FBSမဲရေတွက်သည့်စနစ်ကိုလဲထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။ အချိန်သုံးပတ်အတွင်း မဲအများဆုံးသူတွေက ဆုလက်ဆောင်ရရှိသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။.
အခုအချိန်ကတော့ FBSကုန်သည်တွေထဲမှာ ဘယ်သူတွေက ဓာတ်ပုံစားသလဲ ဆိုတာကို သိရှိနိုင်မယ့် အချိန်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်။!
ပထမဆု ဒေါ်လာ၅၀၀ကို Indonesia မှ Joko Prihatin က ရရှိသွားပါသည်။ - ရဲ့ဓာတ်ပုံက လူကြိုက်နှစ်သက်မှု အများဆုံးရရှိခဲ့ပြီး - FBSမှ ချီးမြှင့်ပေးသောဆုငွေ ဒေါ်လာ၅၀၀ကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်!
ဒုတိယဆု - ဒေါ်လာ၃၀၀ကို - Indonesia မှ Samuel Baryudi က ရရှိသွားပါသည်။ FBSအဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုယ်စား ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်!
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တတိယဆု ဒေါ်လာ၂၀၀ကို - Indonesia မှ Jovianus Kaunang က ရရှိသွားပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်!
ပေးပို့လာတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက အလွန်များပြားတဲ့အတွက် ဆုသုံးခုတည်းပေးရင် သိပ်မျှတမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စဉ်းစားမိတဲ့အတွက် နောက်ထပ်အထူးဆု အမျိုးအစားတွေပါ တိုးချဲ့ပြီး ချီးမြှင့်ပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ FBSဒိုင်အဖွဲ့မှရွေးချယ်ပေးခဲ့သည့် အထူးဆုအမျိုးအစား ၁၂ခုတွင် ဆုရရှိသူတို့ကိုလည်း ဒေါ်လာ၅၀စီအသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်!
ဆုရရှိခဲ့သူတွေအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်! မှတ်ထားပေးရမှာတစ်ခုကတော့: FBSက သင့်အတွက် အခွင့်အရေးတွေ နေ့စဉ်ဆောင်ကျဉ်းပေးနေပါတယ်. ပြိုင်ပွဲတွေ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို ပုံမှန်ကျင်းပပေးနေပါတယ်! နောင်လာမယ့် ပွဲတွေကို သေချာစောင့်ကြည့်ပြီး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အံ့အားသင့်ဖွယ် ဆုလက်ဆောင်များ ရယူလိုက်ပါ!